2. Ingabe ubufakazi beqiniso benkolo kuNkulunkulu uma umuntu ethokozela kuphela umusa kaNkulunkulu? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Uma uthokozela umusa kaNkulunkulu kuphela, unempilo yomndeni enokuthula noma ukubusiseka ngezinto eziphathwayo, lapho-ke awukamtholi uNkulunkulu, futhi inkolo yakho kuNkulunkulu ifadabele. UNkulunkulu usevele uwenzile umsebenzi wesiqephu esisodwa womusa enyameni, futhi usevele wathululela izibusiso zezinto eziphathekayo phezu komuntu—kodwa umuntu akakwazi ukupheleliswa ngomusa, uthando, nesihawu kuphela. Lokho umuntu ahlangabezana nakho kunengxenye ethile yothando lukaNkulunkulu, kumenza abone uthando nomusa kaNkulunkulu, kodwa ukuthola lokhu isikhathi esithile, uyabona ukuthi umusa kaNkulunkulu nothando lwaKhe kanjalo nomusa akukwazi ukwenza umuntu apheleliswe, futhi akukwazi ukuveza lokho okuyinkohlakalo phakathi kumuntu, futhi akukwazi ukuqeda isimo somuntu esikhohlakele, noma ukwenza uthando nokholo lwakhe lupheleliswe. Umsebenzi kaNkulunkulu womusa kwaba umsebenzi wesikhathi esisodwa, futhi umuntu akakwazi ukuncika ekuthokozeleni umusa kaNkulunkulu ukuze azi uNkulunkulu.
Uma umuntu emane ejabulela umusa kaNkulunkulu, ngeke apheleliswe nguNkulunkulu. Abanye bangeneliseka ngokuthula kanye nokujabula kwenyama, impilo elula engenabo ubunzima noma ishwa, ukuhlala ngokuthula nomndeni wabo ngaphandle kokulwa noma izingxabano. Bangaze ngisho bakholwe ukuthi lokhu kuyisibusiso sikaNkulunkulu, kodwa eqinisweni, kumane kungumusa kaNkulunkulu. Ngeke waneliseke ngokumane ujabulele umusa kaNkulunkulu. Lokhu kucabanga okunjalo kuyinhlamba. Ngisho noma ufunda izwi likaNkulunkulu nsuku zonke, ukhuleke nsuku zonke, nomoya wakho uzizwa unenjabulo ethile kanye nokuthula, kepha ekugcineni awukwazi ukukhuluma nganoma yiluphi ulwazi lukaNkulunkulu nomsebenzi Wakhe noma ungenakho okuhlangenwe nakho okunjalo, futhi akukhathaleki noma lingakanani izwi likaNkulunkulu osulidlile noma oliphuzile, uma kungukuthi umane uzizwela ukuthula nenjabulo emoyeni wakho kanye nokuthi izwi likaNkulunkulu limnandi ngokungelinganiswe, kube sengathi awulithokozeli ngokwanele, kodwa ungenakho okuhlangenwe nakho kwangempela futhi ungenasiqiniseko sezwi likaNkulunkulu, khona-ke yini ongayithola kuleyo ndlela yokholo kuNkulunkulu? Uma ungeke uyiphile ingqikithi yezwi likaNkulunkulu, ukudla nokuphuza kwakho amazwi kaNkulunkulu kanye nokuthandaza konke kuthintene nenkolo yakho. Ngakho-ke uhlobo lomuntu onjalo ngeke lupheleliswe futhi ngeke luzuzwe nguNkulunkulu.
Kucashunwe “Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
UNkulunkulu uphelelisa abantu ngokulalela kwabo, ekudleni, ekuphuzeni, kanye nasekuthakaseleleni amazwi kaNkulunkulu, nasenhluphekweni nasekwehlelweni ukucwengwa ezimpilweni zabo. Kusekukholweni okunjalo kuphela lapho izimo zabantu zikwazi khona ukuguquka, kulapho kuphela bethola khona ulwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Ukungeneliswa ukuphila emuseni kaNkulunkulu, ngokuzimisela bomele iqiniso, nokufuna iqiniso, nokufisa ukuzuzwa nguNkulunkulu—yilokhu impela okuchaza ukulalela uNkulunkulu; yilolu ncamashi uhlobo lokukholwa alufunayo uNkulunkulu. Abantu abangenzi okunye ngaphandle kokugcina ngokuhlala emseni kaNkulunkulu kuphela abanakupheleliswa, noma abanakuguqulwa, futhi ukulalela kwabo, ukulunga kanye nothando nokubekezela, konke kulula. Labo abathokozela ukuphila ngomusa kaNkulunkulu kuphela abasoze bamazi ngokweqiniso uNkulunkulu, futhi noma sebemazi uNkulunkulu, ulwazi lwabo lulula; basho izinto ezifana nokuthi uNkulunkulu uyamthanda umuntu, noma ukuthi unomusa omkhulu kumuntu. Lokhu akuvezi impilo yomuntu, akukhombisi futhi lokho ukuthi abantu bamazi ngokweqiniso uNkulunkulu. Uma, ngenkathi amazwi kaNkulunkulu ebalungisa, noma ngenkathi ukuvivinya kubehlela, abantu abakwazi ukulalela uNkulunkulu—uma kungukuthi baba nokungabaza, baze bawe—ngakho-ke abekho nakancane ekulaleleni.
Kucashunwe “Ekukholweni Kwakho kuNkulunkulu Kumele Ulalele UNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Ukholo lwabantu kuNkulunkulu lufuna ukuba uNkulunkulu abanike indawo efanelekile, futhi abanike wonke umusa ongaphansi kwelanga, ukwenza uNkulunkulu inceku yabo, ukwenza ukuthi uNkulunkulu agcine ubudlelwane obunokuthula nobulingani nabo, futhi ukuba zingabikho nhlobo izingxabano phakathi kwabo. Ngakho-ke, ukukholelwa kwabo kuNkulunkulu kufuna ukuba uNkulunkulu athembise ukugcwalisa konke abakufunayo, ukubanika noma yini abayithandazelayo, njengoba kusho iBhayibheli “Ngizolalela yonke imithandazo yenu.” Badinga ukuthi uNkulunkulu angahluleli abantu noma abhekane nabo, ngoba uNkulunkulu uhleli enguMsindisi uJesu onesihe, ogcina ubudlelwane obuhle nabantu bonke ngaso sonke isikhathi nezindawo zonke. Bakholelwa endleleni enjena: Ngokungenamahloni njalo bacela kuNkulunkulu izinto, futhi uNkulunkulu abanike lezo zinto, noma ngabe bayavukela noma belalela. Bayaqhubeka nokufuna ukukhokhwa “kwesikweletu” kuNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu kufanele “akhokhe” ngaphandle kokuzabalaza, akhokhe “isikweletu Sakhe” ngokuphindiwe, noma ngabe uNkulunkulu kukhona akutholile kubona noma cha. Angakwazi ukuba semseni wabo kuphela; akakwazi ukuqondisa abantu ngaphandle kokunika umthetho, ingasaphathwa eyokuba aveze ubuhlakani Bakhe nesimo sokulunga ebesilokhu sifihliwe iminyaka eminingi njengoba efisa kubantu, ngaphandle kwemvume yabo. Bavuma izono zabo kuNkulunkulu futhi uNkulunkulu abathethelele, futhi akumcasuli lokho, futhi uyaqhubeke kuze kube phakade. Bayalela uNkulunkulu nganoma iyiphi indlela futhi uyabalalela, njengoba kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu akezelanga ukukhonzwa umuntu, kodwa ukukhonza, nokuthi weza ukuze abe yisisebenzi somuntu. Ubungalokhu yini ukholwa ngale ndlela? Uma ningazuzi lutho kuNkulunkulu nifisa ukubaleka. Futhi uma kukhona eningaqondisisi kahle niyacasuka, futhi nize nimemeze yonke inhlobo yokuhlukumezo. Ngeke nimvumele uNkulunkulu uqobo Lwakhe aveze ngokugcwele ubuhlakani nezimangaliso Zakhe, kodwa nifuna ukujabulela ukuphumula nokunethezeka okwesikhashane. Kuze kube manje, isimo sengqondo ekukholweleni kwenu kuNkulunkulu sifana nendlela yakudala yokubheka izinto. Uma uNkulunkulu enibonisa ubukhosi obuncane anithokozi; ingabe ubona kahle ukuthi isiqu sinjani? Nicabanga ukuthi nonke nithembekile kuNkulunkulu kodwa eqinisweni indlela yenu endala yokubheka izinto ayikashintshi. Uma ungavelelwa lutho, ucabanga ukuthi konke kuhamba kahle futhi umthanda kakhulu uNkulunkulu. Kodwa uma uvelelwa into encane, uwela phansi eHayidesi. Ingabe lokhu ukwethembeka kwakho kuNkulunkulu?
Kucashunwe “Kufanele Ubeke Eceleni Izibusisio Zesimo Futhi Uqonde Intando KaNkulunkulu Yensindiso Yomuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Abantu abaningi bakholwa kuNkulunkulu ukuze babe nokuthula nezinye izinzuzo. Uma kungeke kukuhlomulise, awukholwa kuNkulunkulu, kanti uma ungawutholi umusa kaNkulunkulu, uyadangala. Lokhu kungaba kanjani yisona siqu senu sangempela? Uma kuziwa ezigamekweni zomndeni ongasoze wazigwema (ukugula kwezingane, ukulaliswa kwabayeni esibhedlela, isivuno esingesihle, ukushushiswa kwamalungu omndeni, nokunye), awukwazi ukumelana nalezi zinto ezivame ukwenzeka ekuphileni. Uma kwenzeka izinto ezinjengalezi, uyethuka, awazi ukuthi wenzeni—futhi isikhathi esiningi, usola uNkulunkulu. Ukhononda ngokuthi amazwi kaNkulunkulu akukhohlisile, ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wenze impilo yakho yabheka phezulu. Ingabe aninayo imicabango enjalo? Ingabe ucabanga ukuthi lezi zinto ziyenzeka phakathi kwenu ngokungavamile kuphela? Zonke izinsuku niphila ngaphansi kwezehlo ezinje. Anicabangi nakancane ngempumelelo yokholo lwenu kuNkulunkulu, nokuthi ningayifeza kanjani intando kaNkulunkulu. Isiqu senu sincane kakhulu, sincane ngisho kunesechwane lenkukhu. Uma ibhizinisi lomyeni wakho lilahlekelwa imali ukhononda ngoNkulunkulu, uma nizithola nisendaweni lapho ningavikelwe nguNkulunkulu nalapho nikhononda ngoNkulunkulu, nikhononda ngisho noma kufa elilodwa emachwaneni enu noma kugula inkomo endala esibayeni, uyakhononda noma sekuyisikhathi sokuthi indodana yakho iqale umndeni kodwa umndeni wakho awunayo imali eyenele, nalapho izikhonzi zebandla zidla izidlo ezimbalwa ekhaya lakho bese ibandla lingakubuyiseli imali noma kungekho okuthumelela noma imifino le, nalapho uyakhononda. Isisu sakho siqumbelene sigcwele ukukhononda, ngesinye isikhathi awuyi emihlanganweni noma udle uphuze amazwi kaNkulunkulu ngenxa yalokhu, uvamise ukucabanga kabi isikhathi eside. Ayikho into eyenzeka kuwe namuhla ehlangene namathemba akho akusasa noma nesiphetho sakho; lezi zinto bezizokwenzeka noma ungakholwa kuNkulunkulu, kodwa namuhla uzenza umthwalo kaNkulunkulu, ulokhu uthi uNkulunkulu ukulahlile. Kuthiwani ngokholo lwakho kuNkulunkulu, ingabe ngempela uyinikelile impilo yakho? Uma nibhekene nezilingo ezifana nezikaJobe, akekho phakathi kwenu olandela uNkulunkulu namuhla ongama aqine, beningawa nonke. Futhi nje, kunomehluko omkhulu phakathi kwenu noPetru. Namuhla, uma kungadliwa ingxenye nje yempahla yenu niyolokotha niphike ukuba khona kukaNkulunkulu; uma ungaphucwa indodana noma indodakazi yakho, ungagijima yonke indawo udinda isililo; uma impilo yakho ifika kwangqingetshe, uzozama ukukhuluma noNkulunkulu, ubuza ukuthi kungani ngisho amazwi amaningi kangaka ekuqaleni ngikuthusa. Ayikho into eningeke nilokothe ningayenzi ngezikhathi ezinjalo. Lokhu kusho ukuthi anikasiboni, futhi aninaso isiqu sangempela.
Kucashunwe “Isenzo (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Ingabe wanelisekile ngokuphila ngokuthula nangokujabula, nangokweneliseka kwenyama okwesikhashana ngaphansi kwethonya likaSathane? Awuyena yini ophansi kunabo bonke abantu? Akekho oyisilima njengalowo obone insindiso kodwa wangalwela ukuyizuza: Bangabantu abazitika ngenyama futhi abajabula ngoSathane. Uthembela ekutheni ukholo lwakho kuNkulunkulu aluzoba nezinselele noma nezinsizi noma ubunzima obungatheni. Uhlezi ulwela lezo zinto ezingenanzuzo futhi ukuphila kwakho awukwenzanga kwaba nenjongo, kunalokho ubeka imicabango yakho ngaphambi kweqiniso. Awulusizo lwalutho! Uphilisa okwengulube—yimuphi umehluko phakathi kwakho nezingulube nezinja? Ingabe bonke labo abangalifuni iqiniso kunalokho bathanda inyama, abazona yini izilwane? Ingabe labo abafile abangenawo umoya abazona yini izidumbu ezihambayo? Mangaki amagama akhulunywe kuwe? Ingabe mncane umsebenzi owenziwe kuwe? Kungakanani engikunike khona? Ngakho kungani ungazange ukuthathe? Yini ongakhala ngayo? Akukhona yini ukuthi awuzuzanga lutho ngenxa yokuthi uyithanda kakhulu inyama yakho? Futhi akukhona yini ukuthi imicabango yakho ibinehaba? Akukhona yini ukuthi uyisiphukuphuku? Uma ungakwazi ukuthola lezi zibusiso, ungamsola yini uNkulunkulu ngokungakusindisi? Lokho okufunayo ukuthola ukuthula ngemva kokukholelwa kuNkulunkulu—ukuze izingane zakho zikhululeke ekuguleni, umyeni wakho athole umsebenzi oholela kahle, indodana yakho ithole umfazi omuhle, indodakazi yakho ithole umyeni okahle, izimbongolo kanye namahhashi kukulimele kahle umhlabathi, unyaka ube nesimo sezulu esihle ukuze izitshalo zakho zingashi. Yilokhu okufunayo. Ufuna kuphela ukuphila ngokunethezeka, ukuba kungenzeki ngozi emndenini wakho, isiphepho singakuthinti, ubuso bakho bungathintwa nayitshe elincane, zingakhukhuleki izitshalo zomndeni wakho, ungathintwa nayinoma iyiphi inhlekelele yemvelo, ukuba uphile ekwamukelweni nguNkulunkulu, uphile ngaphansi kwesivikelo esifudumele. Igwala elinjengawe, elihlezi lifuna okwenyama—unayo inhliziyo, unawo umoya? Ingabe uwusona isilwane? Ngikunika indlela yeqiniso ngaphandle kokuba ngilindele ukuba ungibuyisele okuthile, kodwa wena akukho ukuzikhandla okwenzayo. Awuyena yini omunye wabakholelwa kuNkulunkulu? Ngibeka ukuphila kwangempela komuntu kuwe, nokho wena awenzi lutho. Ingabe ukhona umehluko phakathi kwakho nengulube noma nenja? Izingulube zona azikufuni ukuphila komuntu, azikudingi ukuhlanzwa futhi azikuqondi ukuthi ukuphila kuyini. Njalo ngosuku, uma nje sezidle zasutha, zivele zizilalele. Mina ngikunikeze indlela yeqiniso, nokho wena awukakayitholi: Awazi lutho. Ingabe uzimisele ukuphila lokhu kuphila, ukuphila kwengulube? Sikuphi isidingo sokuphila kwabantu abanjalo? Ukuphila kwakho akuyilutho futhi kuyanyanyeka, uphila emanyaleni futhi ayikho imigomo onayo; ingabe ukuphila kwakho kubi ukwedlula bonke ububi? Ingabe uyanyanya lapho ubheka uNkulunkulu? Uma uqhubeka uzizwa kanjalo, ngeke yini ulahlekelwe yikho konke?
Manje ingabe usuyaqonda ukuthi kuyini ukukholwa kuNkulunkulu? Ingabe ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukubona izimpawu nezimangaliso? Ingabe ngukwenyukela ezulwini? Ukukholwa kuNkulunkulu akulula neze. Lokho kwenza kwasenkolweni kumele kususwe; ukufuna ukuphiliswa kwabagulayo nokukhishwa kwamadimoni, ukugxila ezimpawini nasezimangalisweni, ukufisa umusa kaNkulunkulu omningi, ukuthula nenjabulo, ukufuna ongase ukuthole nokunethezeka kwenyama—lokhu ukwenza kwasenkolweni, kanti lokhu okwenziwa enkolweni kuwuhlobo lokukholwa olungacacile. Namuhla, kuyini ukukholwa kuNkulunkulu kwangempela? Kungukwamukela izwi likaNkulunkulu njengeqiniso lokuphila kwakho nokwazi uNkulunkulu ezwini Lakhe ukuze uzuze uthando Lwakhe lweqiniso. Ukuze kucace: Ukukholwa kuNkulunkulu kungesizathu sokuba umlalele uNkulunkulu, uthande uNkulunkulu, bese wenza umsebenzi okumele wenziwe isidalwa sikaNkulunkulu. Lena yinhloso yokukholwa kuNkulunkulu. Kumele uthole ulwazi lokuthanda uNkulunkulu, nokuthi uNkulunkulu ufanelwe ukudunyiswa, ukuthi, e zidalweni Zakhe, umsebenzi wensindiso uwenza kanjani futhi ubaphelelisa kanjani—lokhu ngokuncane okumele ube nakho ekukholweni kwakho kuNkulunkulu. Ukukholwa kuNkulunkulu kakhulu kungukuguquka empilweni yenyama uye empilweni yokuthanda uNkulunkulu, usuke empilweni yendalo uye empilweni yokuba ngokaNkulunkulu, kungukuphuma ngaphansi kwesandla sikaSathane uphile ngaphansi kokunakekelwa nokuvikelwa uNkulunkulu, kungukwazi ukulalela uNkulunkulu ungathobeli inyama, kungukuvumela uNkulunkulu azuze inhliziyo yakho yonke, ukuvumela uNkulunkulu akuphelelise, uzikhulule esimweni esikhohlakele sikaSathane. Ukukholwa kuNkulunkulu kwenzelwe kakhulu ukuthi amandla nenkanzimulo kaNkulunkulu kubonakale phezu kwenu, ukuze nenze intando kaNkulunkulu, nifeze icebo likaNkulunkulu, nikwazi ukuba ngofakazi bakaNkulunkulu phambi kukaSathane. Ukukholwa kuNkulunkulu akumele kwenziwe ngenxa yezimpawu nezimangaliso, futhi akumele kube ngenxa yenyama yomuntu. Kumele kube okokufuna ukwazi uNkulunkulu, nokulalela uNkulunkulu, njengoPetru, umlalele kwaze kwaba sekufeni. Yilokhu okusemqoka ukuze kuzuzwe.
Okwedlule: 1. Yini ukulandela intando KaNkulunkulu? Ingabe ukulandela intando kaNkulunkulu uma umuntu enza umsebenzi wokuhambisa ivangeli likaNkulunkulu kuphela?
Okulandelayo: 3. Yini ngempela intando yomuntu olandela uNkulunkulu? Futhi yini ubufakazi beqiniso ngokukholwa kuNkulunkulu?